Ela Velona Kokoa Sady Salama? Mamaly Izany ny Fanadihadihan’ny Fanazavana An-tsary · Global Voices teny Malagasy
Ela Velona Kokoa Sady Salama? Mamaly Izany ny Fanadihadihan'ny Fanazavana An-tsary
Voadika ny 02 Mey 2017 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, русский, Français, Svenska, Ελληνικά, Български, polski, عربي, македонски, हिन्दी, Italiano, বাংলা, ଓଡ଼ିଆ , 日本語, नेपाली, Español
Fanazavana an-tsary momba ny mety ho fiovan'ny tsy fahasalamana ao anatin'ny taona maromaro izay mety ho hita ao Amerika Atsimo , nahazoana alàlana .
Nanao fampitahana ny fanadihadihana momba ny taham-pahavelomana tamin'ny alalan'ny fanazavana an-tsary izay mampiseho ny firenena samihafa manerantany ny Medigo, sehatra ara-pahasalamana iray manokana mampifandray ireo marary sy ny dokotera manerantany.
Velona maharitra kokoa noho ny lasa ny olombelona amin'ny ankapobeny. Saika ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao no nahitana fitomboana tamin'ny taham-pahavelomana nanomboka tamin'ny
71,4 taona ny taham-pahavelomana manerantany amin'ny ankapobeny tamin'ny taona 2015 na dia misy aza ny elanelana lehibe manerantany. Eo amin'ny 73 taona eo izany amin'ny ankapobeny any Eoropa sy Amerika Avaratra, 71 taona any Oseania, 70 taona any Amerika Latina, 61 taona any Azia, ary 55 taona any Afrika.
Na izany aza, te-handeha lavidavitra kokoa ny Medigo amin'ny alalan'ny fandefasana ity fanontaniana manan-danja ity:
Nanamafy ny Sampan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana fa velona maharitra kokoa isika , kanefa moa ve isika velona ao anatin'ny fahasalamana?
Ny refin-taham-pahavelomana salama (EVAS) no refy raisin'ny Sampan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana mampiseho ny taona mety antenaina hiveloman'ny olona iray, raha toa ka mahatandrina miaina ara-pahasalamana izy. Maro ny lafiny ahitana fiantraikany amin'izany toy ny kalitaon'ny fikarakarana ara-pitsaboana, ny fahadiovana, ny ady, sns, kanefa tsy ao anatin'izany ny fahafatesana vokatry ny herisetra . Nahitana fivoarana tao anatin'ny taona vitsivitsy ity fanondroana ity .
Nitombo 5 taona ny taham-pahavelomana teo anelanelan'ny taona 2000 sy 2015, izay fitomboana haingana indrindra hatramin'ny taompolo 1960. Mifanohitra tamin'ny fihemorana hita nandritra ny taompolo 1990 ity fivoarana ity, rehefa nihena ny taham-pahavelomana tany Afrika noho ny otrikaretina SIDA ary tany Eoropa Atsinanana vokatry ny firodanan'ny Firaisana Sovietika.
Ao anatin'ny fanazavana an-tsariny, mampitaha ny kaontinanta sy ny firenena samihafa manerana izao tontolo izao ny Medigo mba hanehoana ny fomba niovan'ny taona nahitana tsy fahasalamana nanomboka tamin'ny taona 2000 .
Ny fanazavana an-tsary momba ny fiovana tao anatin'ny taona nahitana tsy fahasalamana manerantany, nahazoana alàlana.
Tao anatin'ny resadresaka fohy niarahany tamin'ny Global Voices, nilaza momba ny fahasamihafana eo amin'ny vinavina mahazatra ny Sampan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana amin'ny ” tsy fahasalamana” i Giulia Gutterer, tompon'andraikitra ao amin'ny Medigo :
Ny taham-pahavelomana manontolo amin'ny ankapobeny no resahintsika eto, ​​izay antenaintsika hivelomana, ​​ary efa voafaritra eo am-pahaterahana, ary anesorantsika ny taonan'ny taham-pahaveloman'ny olona salama . Aorian'izany isika dia mahita ny salan-taona antenaina hahaveloman'ny olona iray ao anatin'ny tsy fahasalamana, na ny ‘taona niainana rofy’. Hita nandritra ny taona maro ny taona nahitana ny faharatsian'ny fahasalamana izay niainan'ny olona manana aretina sy kilema.
Hitanao ny fanazavana an-tsary manerantany sisa ato amin'ny tranonkalanay .
Karaiba 30 Desambra 2021